ဒူဘိုင်းကိုစီးပွားရေးမြို့တော်အဖြစ်လူသိများသည် အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ယူအေအီး၏ Travel Love7စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
မေလ 26, 2019
ဒါကြောင့်သူကပြောပါတယ်ခဲ့ရဲ့သော်လည်းဒူဘိုင်း, စီးပွားရေး၏မြို့အဖြစ်လူသိများသည် သန်းပေါင်းများစွာသောလူများအတွက်ဒူဘိုင်းဆင်းပျံသန်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်သဘာဝသူတို့ရဲ့ဒုတိယအိမ်ဖြစ်လာအထီးကျန်ခံစားရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့အလွန်, ဧညျ့ပညာတတ်ဖြစ်ကြပြီးလည်းမရှိ ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဤမျှလောက်.
ဒူဘိုင်းနေ့စဉျကြီးထွားလာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်အကြီးအကျယ်အသွင်ပြောင်းထားသည်, ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ရှေ့ဆက်သော်လည်းထက်ပို 190 နိုင်ငံများဖြစ်ပါသည် လာမယ့်အောက်တိုဘာလ 2020 နေဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးက Metro built ပွီးပိုပြီးပိုမိုလွယ်ကူတွေအများကြီးခရီးသွားလာစေသည်, လမ်းများပေါ်တွင်လေးလံသောအသွားအလာပျင်းနှင့်လူမျိုးကိုဦးဆောင် မက်ထရိုများအတွက်ရွေးချယ်မည့်အစားတစ်ဦးဘတ်စ်ကားတစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကစီဖမ်း, ကြောင်းဒူဘိုင်းထက်အခြားဒူဘိုင်းရှိလူများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့စားသောက်ဆိုင်၏ပဒေသာသငျသညျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအစားအစာအဖြစ်အများအပြားကြိုးစားကြရနိုငျသညျ, ကြီးမားတဲ့အချိန်အစားကောင်းကြိုက်သူများဖြစ်ကြောင်း, Ultra-ခေတ်သစ်ဗိသုကာနှင့်သွက်တွေကတော့မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒူဘိုင်းကိုလည်းအဖြစ်လူသိများသည် ကမ်ဘာပျေါမှာအလုံခြုံဆုံးမြို့တ, ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သော်လည်း ဒူဘိုင်း သီးသန့်စူပါရှိသည်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောမြို့ဖြစ်၏, ကဘယ်မှာအချိန်ပြန်တတ် ဒူဘိုင်းရှိလူများ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်, ကားများကိုခစျြ၏ဤမျှလောက်ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းရဲများက Buggati, Aston Martin, Rolls Royce နှင့်အများကြီးပိုပါဝင်သော၎င်းတို့၏ရေတပ်မှစူပါဆက်ပြောသည်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ် ဒူဘိုင်းကိုလည်း Celebrity အချက်အချာများအတွက်လူသိများသည်, Movie, ပွဲတော်စာရေးသော်လည်း, ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားတိုင်းလေးပုံတပုံဖြစ်လာတယ်။
အားလုံးဒူဘိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒုတိယအိမ်အဖြစ်လိပ်စာများများအတွက်ကမ္ဘာကြီးရေချိုးခန်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်သရုပ်ဆောင်တွေ, သူတို့စျေးဝယ်ဒီမှာလာ, ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် Burj Khalifa, Burj Al Arab နှင့် Jumeirah Beach နဲ့တူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာနေရာများအတွက်ပရိသတ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ပစ်ခတ်မှုအဘို့နှင့်အတူနှုတ်ဆက်, အပြင်သဘင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကနေကျွန်တော်တို့ Little ကသင်သိရ ဒူဘိုင်းပိုကြီးတဲ့စကေးအပေါ်မေတ္တာမသူတို့သည်နောက်အချိန်အတွင်းမှာသူတို့ရောက်ရှိမဆိုတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဖြတ်ပြီးလာအခါတိုင်း, ဒီမှာရှိလူများခွဲဝေမှုဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်နေကြသွားလာရင်းညံ့ဖျင်းရဲ့ကူညီလေ့ သေချာသူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာစေရန်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် Mena ဒေသတွင်မဆိုအခြားမြို့ထက် သာ. ဝင်ငွေ!
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများသော်လည်းအချို့နေရာများ၌အခမဲ့နေထိုင်ပြီးစားနိုင် ဒူဘိုင်းလူတွေကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ၎င်းတို့၏လက်နက်တိုးချဲ့ထားပါတယ် ကအခမဲ့တကယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တတျနိုငျသအဖြစ်လူတွေကစိတ်ကူးယဉ်စတင်လိမ့်မည်ဟု, ငါအခမဲ့လို့ပြောလာသောအခါအချို့သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ ကောင်းစွာအလုပ်ရှာဖွေသူများပြုမူဆက်ဆံသူအအသိုင်းအဝိုင်းကလူဤငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်ကြိုးစားသူကိုလူလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြသထားတယ်။
သင်ရှုပ်ထွေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးပေါစျေးနှုန်းများနှင့်အတူများစွာသောရွေးချယ်စရာရှိဘွဲ့အာကာသတှငျနထေိုငျဖို့ရှိသည်လျှင်ပင်သို့မဟုတ်သော်လည်းအချို့သောနေရာများတွင်မှာလည်းတည်ရှိသည်နေထိုင်ရန်အဆောင်များရှိပါတယ် အလုပ်ရှာသူများကသင်၏ဗီဇာပေါ် မူတည်. ယာယီထွက်ခွာနိုင်သငျသညျဒူဘိုင်းဆင်းပျံသန်းမတိုင်မီသည်, ပြုရမည် သငျ့လျြောသောသုတေသန အထူးသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုရှိသူတို့အဘို့, သူတို့ကိုယ်သူတို့မွို့၌တပါးအမျိုးသားကိုတွေ့သူကိုလူများအတွက်အလွယ်တကူလျှောက်တွင်ရရှိနိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်း, ဒူဘိုင်းအသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတိပြုမိလိမ့်လူကူးဖြတ်ကူးစဉ်သတိထားရပါမည် သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါမကြီးမားကျယ်ပြဒဏ်ငွေပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်အဆိုပါလမ်းမပေါ်တွင်အမှိုက်သရိုက်စွန့်ပစ်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တံထွေးထွေးခြင်း, ဒါကြောင့်တပ်လှန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်, ဒုက္ခ၌သငျထဆင်းသက်နိုင်အမြဲသယ်ရမယ် ဗီဇာမိတ္တူ သင်အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ပြီးနောက်သင်ကရတဲ့လိမ့်မည်သည့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ID ကိုရှိသည်သည်အထိရဲတပ်ဖွဲ့သည်သင်၏လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမစောင့်အဘို့မိမိတို့ထိန်းသိမ်းထား၌သငျယူစေခြင်းငှါ, အတိုင်းဘေးကင်းဘက်မှာဖြစ်, ဤအခြို့သောမနှင့် wont ရဲ့များမှာ.
အလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်အတူစတင်နိုင်ရန်အနည်းငယ် hectic ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြိုင်ပွဲ ဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာအမြော်အမြင်ရှိရှိအနေအထားကိုရွေးချယ်ဖို့ကလူကိုဦးဆောင်, အခွက်တဆယ်ကိုစာရေးတံနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတွေထဲကနေလူတွေရှိပါတယ်, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကောင်းစွာအတွေ့အကြုံရှိနေသောကြောင့်လူ ပိုပြီး preference ကိုပေးလိမ့်မည်, သင်တစ်ဦးထက်ပိုလတ်ဆတ်ကအနည်းဆုံးဖြစ်, ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွိုတငျပွငျဆငျနေလျှင်ဒီတော့ပိုလတ်ဆတ်သော်လည်းခဲ, ဧည့်ခံပါလိမ့်မည် အဆင်သင့်အလုပ်မလုပ် ဒါကြောင့်အချို့ကုမ္ပဏီများသည်မဟုတ်ဘဲအတွက်ကြီးမားကျယ်ပြငွေပမာဏကိုချပြီးထက်တစ်စိမ်း-sum ငွေပမာဏကိုပူဇော်နိုင်မ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များငှားရမ်းနှင့်အချို့သောရှာဖွေစုဆောင်းလည်းအထူးသ, ဆိတ်ကွယ်ရာတဲ့အခါမှာသင်နေတဲ့ပိုလတ်ဆတ်ဆင်းကိုခြေရာခံ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းစစ်မှန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏သေချာပါစေ။
အချို့သောအတုအယောင်က်ဘ်ဆိုက်များကိုသူတို့အတောင်အောက်၌ထောင်ချောက်သင်သည်ငှါနှင့်မျှမကုမ္ပဏီများမှပိုက်ဆံတောင်းမယ်လို့သော်လည်း, ပိုက်ဆံတောင်းသောကြောင့် စုဆောင်းမှုမဆိုမျိုးများအတွက် သငျသညျဤအခြေအနေတကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလျှင်တပ်လှန့်ခြင်းရှိလော့။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင်စိတ်ချစွာကြွင်းသောအရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်တို့သည်လည်းလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သေချာအောင်သင်သည်သူတို့၏ရုံးခန်းများ Google နှင့်အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်စေရန်ရှိသည် အချို့အလုပ်အေးဂျင့်ကိုရှာဖွေ သူတို့သည်သင်၏နောက်ခံနှုန်းအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အင်တာဗျူးစီစဉ်သော်လည်း ဆက်စပ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သူတို့မှာလည်းကုမ္ပဏီ၏သူတို့လုပ်နှင့်အတူလည်စည်း-ups ရှိသည်အဖြစ်သင်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုစာတစ်စောင်ကိုလက်မှတ်ထိုးမှသာအခါ, အကြောင်း, ရိုးသားဖို့ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုသည်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလစာအချို့ရာခိုင်နှုန်းတောင်းခံ သင့်ရဲ့အလုပ် သူတို့အဖြစ်ကဒီမှာလိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်. မစိုးရိမ်အများကြီးပိုပြီးလွယ်ကူစေရန်, ဒါသူတို့စစ်မှန်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ ဤနေရာတွင်ပိုလတ်ဆတ်ကူညီရန်.
သူတို့ပဲကျပန်းကုမ္ပဏီ၏ရာ၏ယေဘုယျအီးမေးလ်ကအိုင်ဒီမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုဖြန့်ဝေနေသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းယူအေအီးအတွက် CV ကိုဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်, ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတဘို့ရွေးချယ်ဖို့မအကြံပြု ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် LinkedIn တို့အကောင့်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မည်သင်တို့သည်လည်းမိမိတို့၏အောက်ပါကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကအီးမေးလ်အိုင်ဒီကိုရှာတွေ့ခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာလုပျနိုငျသညျ။
ယနေ့ခေတ်ယူအေအီးအတွက်အတုတွင်ကျယ်စွာ Creating သူများ, အပြစ်မဲ့သောလူမှတဆင့်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်တစ်ဦးအရာဖြစ်လာကြပါပြီ ကွဲပြားခြားနားသောမြို့များမှလာသူတွေကို ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလိမ်လည်မှုမှကြီးမားကျယ်ပြငွေပမာဏကိုပေးဆောင်တစ်ချိန်ကပင်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, လွယ်ကူစွာသူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာလဲကျ ပြန်လာအတွက်အလုပ်အကိုင်အမျှော်လင့်ငယ်သူတို့ဒူဘိုင်းကအမြဲသူများကလူကိုခြေရာခံများနှင့်လိမ်လည်လုပ်ဆောင်မှုများထဲကနေလူတွေကယ်ဖို့ယူအေအီးကိုဖြတ်ပြီးတစ်တပ်လှန့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဒီ fraudsters အကြောင်းကိုသိကြပါဘူး။
အားလုံးအထက်ငါဆို ကလိုချင်သောအလုပ်နှင့်အတူဆင်းသက်ရန်လွယ်ကူမယ့်သူတို့ကိုသင်နှင့်သင်၏ပထမဆုံးစာချုပ်အပြီးသတ်ပြီးနောက်မဟုတ်ဘဲအခြားအနေအထားလျှောက်ထားရန်ကြိုးစား, သင်ကြိုက်တတ်တဲ့ကိုမဆိုစက်မှုလုပ်ငန်း entry-level အနေအထားအထိ ယူ. သင့်ရဲ့သုတေသနစတင်ရန် သငျသညျကျိန်းသေနှစ်သက်တဲ့အနေအထားအရပါလိမ့်မယ်။
အတွေ့အကြုံသင်သည်များစွာသောအမှုအရာသှနျသငျ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်သင်သည်သင်၏အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲပြီးအများကြီးပိုလိမ့်မည်။ အလားတူပင်, အခြားသူများကိုကူညီတဲ့ကွန်ယက်ကိုဖြစ်စေလျက်, သူတို့ထံမှအကူအညီကိုရှာနှငျ့သငျပါလိမျ့မညျနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူသစ်ဖြည့်ဆည်း ကျိန်းသေဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်.
အမည်: မိုဟာမက် Aymen Sunheri
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။